China pcb kurongedza vagadziri uye fekitari, vatengesi Zvinyorwa | Pandawill
Chiono & Basa
Chigadzirwa & Sevhisi
Tenga Nguva & FAQ
Bhokisi Kuvaka & Mechnical Assembly
Kuongorora & Kuyedza
Kwayedza & Chishandiso
Diki / Pakati / Yakakwira Vhoriyamu
Kurongedza & Logistic
1 & 2 Rukoko pcb
Pcb Dhizaini Kugona
Pcb nhema nhema
Pcb Assembly kugona
Pcb nhema Mhando
Pcb Assembly Yakanaka
Kwayedza & Kuyera
Pcb Kugadzira Chigadzirwa Center
Pcb Assembly Chigadzirwa Center
USB Explorer USB 3.0 uye 2.0 Bvunzo System
Railway Kudzora Sisitimu
4 dura rakaomarara flex redunhu bhodhi remotokari
10 denderedzwa redunhu bhodhi yeA Ultra-yakaoma PDA
10 rukoko HDI pcb marongerwo
Zvivakwa zvedu zvakashongedzwa zvakanaka uye kugona kwakanyanya kwemhando pamatanho ese ekugadzira anotigonesa kuvimbisa kugutsikana kwevatengi kwePcb Layout, Rukoko Circuit Board, Pcb nhema, Pcb nhema uye Assembly, Tinogamuchira noushamwari vatengi, shamwari dzebhizimisi uye shamwari kubva kumativi ose enyika kuti vatibate uye titsvake kubatana kwekubatsirana. Isu tinovimba nesimba rakasimba rehunyanzvi uye tinoramba tichigadzira matekinoroji akaomeswa kusangana nezvinodiwa zvePCB Marongero, Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvinovimbwa nevashandisi uye zvinogona kusangana zvichiramba zvichikura zvido zveupfumi nemagariro. Tinogamuchira vatengi vatsva nevakuru kubva kumafambiro ese ehupenyu kuti vataure nesu kuitira hukama hwebhizimusi hweramangwana uye kubudirira mukuwirirana!
12 rukoko HDI pcb yegore komputa
Iyi gumi nembiri dunhu redunhu bhodhi reMiti komputa chigadzirwa. HDI mabhodhi, imwe yeanokurumidza kukura matekinoroji mumaPCB, ave kuwanikwa kuPandawill. HDI Mabhodhi ane mapofu uye / kana akavigwa vias uye anowanzo kuve nema microvias e .006 kana mashoma dhayamita. Ivo vane akakwirira wedunhu kuwanda kupfuura echinyakare wedunhu mabhodhi.
Kune marudzi matanhatu akasiyana emabhodhi eHDI, kuburikidza nemavhesi kubva kumusoro kusvika kumusoro, aine mavazi akavigwa uye kuburikidza nemavias, maviri kana anopfuura HDI dura nepashure pemavhesi, pasisitimu yekushambadzira isina kubatana kwemagetsi, kuvaka kusingagumi uchishandisa matete maviri uye kumwe kwakasiyana kwezvivakwa zvisina musoro uchishandisa mapara maviri.
2 rukoko Zvichienderana pcb FPC pamwe FR4 stiffener
Iyi i2 yakaturikidzana inochinjika pcb inoshandiswa kune telecom 4G moudule. Pandawill inogadzira imwechete yakaturikidzana uye yakapetwa-mativi uye Multilayer anosvika gumi akaturikidzana anochinja masekete. Iyo yakajairwa pamusoro pekupedzisa ndeye HASL inotungamira yemahara uye ENIG. Zvichienderana nezvinodiwa, huwandu uye marongero, mitsetse inosarudzwa kucheka ne laser, asi mehendi yekugaya zvakare inogoneka.
Ichi chirongwa chePCB gungano remakemikari anoongorora mudziyo. KuPandawill, kwedu tester tekinoroji kunzwisisa kunotiita isu rakasarudzika mudiwa kune chishandiso & kuyera bhizinesi uye isu tiri kuendesa mhinduro kumakambani anotungamira pasi rose
Dhijitari musuwo chiratidzo system
Ichi chirongwa chePCB gungano redhijitari yemasaini chiratidzo. Dhizaini yemusuwo wedhijitari yakaiswa kunze kwemusuwo wemba mune masitepisi. Masitepisi haangori nemusoro wenyaya unowirirana, asi kumaka zita kana uchifamba kunoitiswawo zvakanyanya apo mazita ese anogona kubatwa zvakananga pamusoro peinternet.
6 rukoko vanachandagwinyira Flex pcb
Iyi i6 yakateteka yakaoma-inoshandura redunhu bhodhi yeOptics chishandiso. Iyo yakaoma flex flex pcb inoshandiswa zvakanyanya muhunyanzvi hwekurapa, maseru, mechatronics kana zvishandiso, zvemagetsi zvinosvinira huchenjeri hwakawanda munzvimbo diki diki, uye huwandu hwekupakata hunowedzera kurekodha mazinga zvakare & zvakare
8 dura redunhu bhodhi OSP kupera kweiyo yakadzika PC
Iyi i8 maseru wedunhu bhodhi yemukati PC chigadzirwa. Iyo OSP yekupedzisa (Organic Surface Preservative) inharaunda-inoshamwaridzika, uye yakasvibira zvakanyanya kunyangwe ichienzaniswa nemamwe Lead-Mahara pcb magumo, ayo anowanzo aine zvinhu zvine chepfu, kana kuda simba rakanyanya kushandisa simba. OSP yakanaka isina lead-isina pamusoro pekupedzisa, ine nzvimbo dzakapetana dzeSMT Assembly, asi zvakare ine hupenyu hwakafupika.
Ichi chirongwa chePCB gungano rezvitima singal control system. Iyo indasitiri indasitiri yanga iri nhoroondo chimwe chikamu chikuru chakashandiswa naPandawill asi isu tave kupupura Internet yezvinhu, takatarisana neindasitiri yeInternet yezvinhu (IIoT), iyo ichaunza kubatana uye otomatiki kumafekitori nemakambani akatenderedza nyika.
6 redhiyo redunhu bhodhi yeindasitiri yekuona & kutonga
Iyi i6 yakatenderera wedunhu bhodhi yeindasitiri yekuona & kudzora chigadzirwa. Ul Certified Shengyi S1000-2 (TG≥170 ℃) FR-4 zvinhu, 1 OZ (35um) mhangura ukobvu, ENIG Au Ukobvu 0.05um; Ni Ukobvu 3um. V-zvibodzwa, CNC hwokugaya hwakabvira (hwokutiparadza). Zvese kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa neRoHS.
FPC inochinja dunhu ine 3M stiffener & dome
Ichi chirongwa chePCB gungano re USB Explorer USB 3.0 uye 2.0 Bvunzo System. KuPandawill, kwedu tester tekinoroji kunzwisisa kunotiita isu rakasarudzika mudiwa kune chishandiso & kuyera bhizinesi uye tiri kuendesa mhinduro kumakambani anotungamira pasi rese.
Eagle Pcb Dhizaini, Pcb & Pcba Mugadziri, Nanya Laminate pcb Mugadziri, Isola Fr406 pcb Mugadziri, Inorema Mhangura Circuit Board, Pcb marongerwo Guideline, Pcb Kugadzira, 12 rukoko pcb Mugadziri,
runhare 0755 2790 0595
kero R1605 Baoyunda Logistic R&D Center Xixiang Street, Bao'an Ruwa Shenzhen, China 518102
bhokisi retsamba sales@pandawillcircuits.com